Uyifaka kwaye uyenze kanjani i-Photoshop CC kwi-Ubuntu | Ubunlog
Uyifaka njani kwaye uyisebenzise i-Photoshop CC kwi-Ubuntu
ULuis Gomez | | Tutorials
Photoshop Iseyinkokeli engenakuphikiswa kwiinkqubo zokuhlela iifoto namhlanje. Ithunyelwe ngokusemthethweni kwiinkqubo ezininzi zokusebenza kodwa, nanamhlanje, iLinux ayikho enye yazo. Esi sinesisombululo esilula sokubulela kwizixhobo ezinje Playonlinux, Esivumela ukuba siqhube iinkqubo zeqonga leWindows ngokwendalo ngaphakathi kweLinux.
Ukuba ukuqala kwakhona ikhompyuter yakho ukuqala indawo yeWindows okanye ukuqhuba inkqubo phantsi kwendalo ebonakalayo ayisosisombululo esikwanelisayo, esi sikhokelo siza kukufundisa Uyifaka njani kwaye uyiqhube njani iFotohop CC ku-Ubuntu.
Ixesha lokubaleka apho la manyathelo alandelayo enziwa khona UMATE, ezingafanelanga ukwahluka kwabanye ngokubhekisele kumxholo wazo kodwa yimpawu yomzobo kuphela. Yintoni egqithisile, Inguqulelo ye-Photoshop CC esisebenza kuyo yinguqulelo engama-32-bit ukusuka ngo-2014, kuba le yavela ngo-2015 ayihambelani neLinux. Kuba iAdobe isusile uguqulelo lwangaphambili kwiwebhusayithi yayo, kuya kufuneka uyijonge ukuba awunayo eyokuqala ukuba usebenzele kuyo.
1 Ukufaka iAdobe Photoshop CC
2 Ukuqhuba i-Photoshop CC
Ukufaka iAdobe Photoshop CC
Inyathelo lokuqala ekufuneka silenzile kukufaka isixhobo sePlayOnLinux. Singayenza ngomphathi wesoftware yenkqubo yethu (Ubuntu Software Centre) okanye ngokwakho iphepha lewebhu apho yonke inkqubo yokufaka ichazwa ngesandla.
Emva koko siza kuqhuba usetyenziso lwePlayOnLinux kunye Siza kukhetha uhlobo lweWayini kwimenyu yezixhobo. Kuya kufuneka sikhethe uhlobo lwe Iwayini 1.7.41-PhotoshopBrushes kwaye emva koko uyifake.
Nje ukuba inkqubo igqityiwe, siya kubuyela kwi-windowsOnLinux ephambili kwaye ucofe iqhosha Faka> Faka inkqubo engadweliswanga (ifunyenwe kwikona yasekhohlo).
Ke kwiscreen esilandelayo, siya kwenza Cofa kwiqhosha elilandelayo kwaye siza kukhetha ukhetho Faka inkqubo kwi-drive entsha ebonakalayo.
Inqanaba elilandelayo unike igama kwisicelo se-Photoshop CC, ethi kuthi yiFotohopCC.
Okulandelayo, qiniseka ukuba usebenzisa uhlobo olwahlukileyo lweWayini kunenkqubo yenkqubo, uyiqwalasele kwaye ufake iilayibrari eziyimfuneko.
Kwisikhokelo sethu Siza kukhetha uhlobo lwewayini "1.7.41-PhotoshopBrushes" (Ukuba ayiveli kuluhlu, buyela umva ngaphezulu kwamanyathelo angaphambili kwaye uyifake).
Ifestile elandelayo izakuvumela ukuba ukhethe ifayile ye Inguqulelo engama-32 eziza kusebenza phantsi kwendalo yeWindows. Qinisekisa khetha iWindows 7 hayi iiWindows XP, Olukhetho oluphawulwa ngokusilelayo.
Okulandelayo kuza inyathelo elinzima ngakumbi (ukuba linokuqwalaselwa linje), kuba ibandakanya khetha ukuba zeziphi iilayibrari esifuna ukuzibandakanya ye-Photoshop CC ukuba iqhubeke ngokufanelekileyo. Siza kukhetha iibhokisi ezibhekisa kula mathala eencwadi alandelayo:
Nje ukuba kwenziwe oku, siza kucofa kwiqhosha elilandelayo. Emva koko kuya kufuneka hamba uye kwindawo apho ikhoyo i-Photoshop CC kwaye uqalise kuyo ukwenziwa kwayo.
Ukuqhuba i-Photoshop CC
Nje ukuba ukufakwa kwe-Photoshop CC kugqityiwe, ukuba akunjalo siyaqhubeka bhalisa ikopi yethu yenkqubo Siza kuqhuba uvavanyo lwentsuku ezingama-30. Kule meko kuyakufuneka oko masikhuphe unxibelelwano lwekhompyuter ukuze uqhubeke. Siza kucofa Bhalisa kwaye siya kulinda inkqubo ukuba ibuyisele umyalezo wemposiso, ngelo xesha siya kuqhubeka nokucinezela Bhalisa kamva.
Abanye abasebenzisi baya kuqaphela ukuba ibha yokufaka iyanyamalala ngaphambi kokuba bafikelele esiphelweni sayo, endaweni yoko a Impazamo yomyalezo. Akufanele ukhathazeke ngale meko njengoko inkqubo iqhubeka nokuqhuba ngasemva. Ke, hlala eminye imizuzu embalwa ingqalelo kwinkqubo kwaye ucofe iqhosha elilandelayo.
Okokugqibela, unokwabela ikhonkco kwiPlayOnLinux yeFotohop CC eya kuthi ngokuzenzekelayo yenze i icon kwidesktop yakho.
Inqaku lokugqibela elivela kumbhali, ukuba kukho nasiphi na isixhobo esinjengeluncedo Ulwelo ayisebenzi kuwe ngokuchanekileyo, yiya ku-Pizingqinisiso> Ukusebenza kwaye sukukhangela ukhetho "Sebenzisa iprosesa yemizobo".
Umthombo: Ubugcisa bokufezekisa impumelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Uyifaka njani kwaye uyisebenzise i-Photoshop CC kwi-Ubuntu
UAbhisal Ilustra Edita sitsho
Kwiminyaka embalwa edlulileyo bendikhathazekile ndizama ukufaka isuti yeAdobe ku-Ubuntu, ke kuye kwanyanzeleka ndisebenzise iGimp, iSribus ... kunye neenkqubo ezifanayo, ngoku andizukuphindela kwiAdobe.
Phendula u-Abisal Ilustra Edita
UDiego Martinez Diaz sitsho
Phendula u-Diego Martinez Diaz
ULuis Allamilla sitsho
Awazi kwanto Diego Martinez Diaz ... Photoshop okanye ndiza kufa
Phendula uLuis Allamilla
Umoya we-adobe awusahambelani ne-linux, ndinelayisensi ye-adobe ehlawulelweyo kodwa xa ndizama ukukhuphela ifotoshop indixelela ukuba "le nkqubo ayihlangabezani nezona mfuno zisezantsi"
Kulusizi ukuba ngalo lonke ixesha zisenza kube nzima ngakumbi kuthi ukufikelela kwezi nkqubo ukusukela apha
Ukuba neenketho ezinje ngeGimp okanye iKrita kunye nezinye iindlela ezingapheliyo zasimahla ... kutheni uwela kwinethiwekhi ye-adobe kunye nokudelela kwabo, kuxhaswa yiMicrosoft, kubasebenzisi beGnu / Linux? Ndisebenze ngobuchwephesha ukusukela kwiminyaka yama-90 kwimicimbi yoyilo lokumamela kunye nokuzoba kwaye ndisebenze iminyaka emininzi ndinezixhobo zeadobe, namhlanje phantse yonke into endiyenzayo kwi-gnu / linux, apho iBlender isebenza ngcono kuneefestile, apho iMaya izinze ngakumbi kwaye ngokukhawuleza, nangona oku kungekho simahla, apho ngeGimp, Krita kunye nezinye iindlela ezinje nge-natron kunye ne-kdenlive ndinokusebenza ngokugqibeleleyo ... into endiyigcinayo ngonyaka kwilayisensi indinika ukuba ndihlaziye umatshini wam. Ndibulela ngokungapheliyo kulwazi oluvulekileyo endithe kwiminyaka embalwa bendisenza amalizo ukukhuthaza uphuhliso, andifuni nokuyibona ilogo ye-adobe, indenza ndicatshukiswe ... kunye nembeko yayo kwiMicrosoft, njengoko sisazi lelinye lawona masheya aphambili e-Apple, ndiyacekisa ...
UJuan Carlos Herrera Blandon sitsho
Ndiyabulela kakhulu ngenxa yokhuthazo, inyani indenza umsindo ukuba iinkampani ezinkulu njengeMicrosoft zisebenzise amandla okwenza into eziyifunayo ngabantu, yiyo loo nto ndifunda ukusebenzisa iLinux OS kule meko Manjaro kwaye Ubuntu, iindawo ezimbini zokugcina kodwa ndiza kubona ukuba yeyiphi endiyithandayo. Ukubulisa
IGalago Pro enye indlela eya kwi-Macbook?